I. F.Rainandriamampandry – FJKM
40 taona / Institut FJKM Rainandriamampandry
Tonga eo amin´ny fotoana hamaranana ny fankalazana an´Andriamanitra noho ny faha-40 taona nanabeazana teo amin´ny IFR ny Fiangonana. Hakatona ny Alahady 27 Oktobra 2019 izao tokoa mantsy ny taom-pankalazana, ary hotokanana amin´io fotoana io ihany koa, raha sitrapon´Andriamanitra, ny tsangambato nentina nanamarika izany fotoan-dehibe izany.
LABORATOIRE INFORMATIQUE ET SCIENTIFIQUE
Diboky ny hafaliana ny mpianakavin´ny Sekoly, ny Tale sy ny mpiara-miasa aminy, fa indrindra ny Ray aman-dreny sy ny mpianatra izay hisitraka mivantana izany tsangam-bato izany : laboratoara informatika vaovao, laboratoara siantifika, toeram-pizaham-pahasalamana sy fitsaboana nify ho an´ny mpiasa sy ny mpampianatra. Samy hosantarina manomboka ny taom-pianarana vaovao avokoa ireo afa-tsy ny fitsaboana ny nify izay miandry aoriana kely.
Isaorantsika Andriamanitra noho ny harem-pahasoavana atolony isan´andro ho an´ny fiangonany, Isaoranay ianareo mpianakavin´ny finoana, tia ny asan´Andriamanitra ary koa tia ny Sekoly, nifanome tànana nandritra ny fotoam-pankalazana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho Voninahitry ny anarany (Heb 6: 10a).
Eto am-pamaranana dia tianay ny mampandre ny rehetra fa efa nisokatra ny Alatsinainy 1 jolay 2019 teo ny fandraisana mpianatra vaovao ho an´ny taom-pianarana 2019-2020, ary hikatona izany rehefa feno ny toerana izay mitsinjara toy izao ho an´ny mpianatra vaovao:
Kilasy / toerana
6eme / 40
5eme / 10
4eme / 15
3eme / 15
2nde / 30
1ere L / 10
1ereS / 10
Tle L /20
Tle S/ 15
2nde G2&amp;3 20
1ere G2&amp;3 7
Tle G2&amp;3 10
Fampitam-baovao avy amin´ny sekoly IFR